Jaantuska Renko - qalab wax ku ool ah oo ku saabsan ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah | vfxAlert official blog
Jaantuska Renko - beddelaad faaiido u leh falanqaynta laambadda
Waxaa lagu alifay Japan, jaantusyada laambadda waxay noqdeen heerka rasmiga ah ee lagu muujiyo dhaqdhaqaaqa sicirka ee dhammaan meheradaha ganacsi ee caanka ah. Muddo 200 sano ah hadda, qaababkoodu waxay keeneen faa'iido xasiloon inkasta oo Ganacsi Sare (HFT) iyo tabo cusub oo farsamo. Laakiin sidoo kale waxay leeyihiin beddelaad wanaagsan oo ku saabsan sida calaamadaha u shaqeeyaan ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah , sida baararka qiimaha Renko.
In kasta oo jadwalka jadwalka uu ku yaal dhammaan boosteejooyinka, xaqiiqda, waxay macno samaynaysaa oo keliya falanqaynta aasaasiga ah. Dhammaan calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ee bilaashka ah ee wararka iyo istaraatiijiyadaha, oo ka duwan Renko, waxay ku xiran yihiin si gaar ah waqtiga, iyada oo aan la falanqeyn sida qiimaha u dhaqmay ka hor ama ka dib sii deynta dhacdada aasaasiga ah.
Muddooyinka waxqabadka kordhay ee furan / dhow iyo iskudhafka kalfadhiyada ganacsiga, marka xulashooyinka calaamadaha ganacsiga ay muujiyaan qiimo farabadan oo fiiqan iyo tilmaamayaasha ayaa bilaabaya bixinta inta badan calaamadaha been abuurka ah, sidoo kale waxay soconayaan waqti xaddidan sidoo kale waxaa lagu kala saari karaa inay yihiin aasaasi .
Falanqaynta farsamada iyo garaafka, xaalada waa la rogay - suuqa waxaa lagu galay iyadoo loo eegayo xogta qiimaha. Macno malahan inta ay qaadatay in la sameeyo qaab, laga gudbo celceliska dhaqaaqa, gal oscillator-ka aagag xad dhaaf ah / xad dhaaf ah, ama muuqaalka calaamadaha cusub ee binary auto. Xaaladdan oo kale, waqtiga ayaa gebi ahaanba la iska indhatiri karaa jaantuska "synthetic" sida dhibic iyo jaantus ama Renko.
Mabda'a baararka dhismaha
Jabaaniiska, Renko waxaa loola jeedaa "Wadada xasilloon" iyo qaybta shaxda waxaa loo yaqaan "leben". A "leben" cusub ama calaamadaha ganacsiga calaamadaha ikhtiyaariga ah ayaa ka muuqda jaantusyada oo keliya haddii dhaqdhaqaaqa sicirka uu ka batay qiimihii la dejiyey. Laba xuduudaha ayaa loo isticmaalaa:
Cabirka baarka ama marinka. Tirada dhibcaha qiimaha waa inay u gudbaan muuqaalka "leben" cusub.
Qiimaha xisaabinta. Asalka waa dhowyahay. Waqtiyada hoose ee hoose, Sare / Hoose ayaa loo isticmaali karaa. Baarka kor u kacaya, haddii farqiga u dhexeeya kii hore ee hore iyo kan hadda uu la mid yahay ama ka weyn yahay marinka, baarka soo degaya waxaan ku xisaabineynaa farqiga u hooseeya.
Dhammaan baararka ayaa leh cabir isku mid ah, haddii qiimaha uu ka gudbay qiimaha ka sarreeya marinka, calaamadaha ganacsiga nool ayaa u muuqda. On isbeddel xoog leh, dhowr baararka ayaa laga yaabaa inay soo muuqdaan hal mar. Xusuusnow in waqtiga aan lagu xisaabtamin; sidaa darteed, qiimaha dheereeyaa uma dhaqaaqo ama uma dhaqaaqo dhinac cidhiidhi ah, dib u dhaca weyn ee ka imanaya jaantusyada laambadda.
Baararka cusub ee 'Renko' waxaa lagu soo bandhigaa xagal ah +45 digrii oo kor u kaca ah iyo -45 soo degitaankeeda. Kadib markay ka soo muuqdaan jaantuska, lama tirtiro ama dib looma sawiro.
Sida aad arki karto, habka falanqaynta suuqa la fududeeyay. Tusaale ahaan, hal-daqiiqad jaantusyada Forex, maalin ganacsi waxay ka kooban tahay 1440 shumacyo, isla mar ahaantaana, sida ku cad habka Renko oo leh marin 10 dhibcood ah; waxaan helnaa celcelis ahaan 20-40 baararka. Waad dooran kartaa calaamadaha ganacsiga ee la midka ah Dhaqdhaqaaqa Celceliska ee muddada dheer - isbeddelka jihada ayaa tilmaamaya bilowga isbeddel cusub oo dhexdhexaad ah.
Jadwalka waqtiga ka weyn M30, ka saarista "buuqa" adoo adeegsanaya Renko sidoo kale saameyn xun ayuu leeyahay - waad ka boodi kartaa meelaha wanaagsan ee laga soo galo dib u soo noqoshada iyo ganacsiga ka soo horjeedka. Sidoo kale, jaantusyadu si sax ah uma shaqeyn doonaan haddii tilmaamayaasha mugga shilinta la isticmaalo .
Sidaa darteed, hawsha ugu weyn ee ganacsade waa inuu doorto qiimaha saxda ah ee qiimaha baarka, gaar ahaan haddii ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah. Barta jaantusyada ayaa noqon doonta xisaabinta iskucelcelis la'aanta 15-20 maalmood ee ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqa hantida. Marka xigta, waxaad u baahan tahay inaad go'aan ka gaarto istiraatiijiyadda loo adeegsaday - ee loogu talagalay xoqidda iyo kuwa intraday, waa inaad diirada saartaa 5-15 dhibcood, iyo kuwa dhexdhexaadka ah iyo kuwa muddada-dheer ah, waxaad ku kordhin kartaa illaa 20-40 dhibcood. Hantida kasta, qiimayaasha waa in si gooni ah loo xusho, iyadoo kuxiran astaamaheeda iyo waqtiga ganacsiga.
Tusaale istiraatiijiyad ganacsi
Waxaan ka ganacsan doonnaa maalinta ugu yar ee loo yaqaan 'cryptocurrency' iyada oo aan la adeegsan jaantusyada laambadda. Marka laga soo tago Renko, waxaad u baahan tahay inaad dejiso MACD oscillator (xuduudaha caadiga ah) iyo oscillator isku dhafan "Stochastic RSI" oo leh muddo 28 ah.
Waxaan fiirineynaa calaamadaha ganacsiga ee ugu horreeya ee isbeddelka ku saabsan MACD, ha u raadin kala duwanaansho suurtagal ah - ficil ahaan kuma dhacaan jaantusyada synthetic, xitaa haddii ay jiraan kala duwanaansho, kiisaska intooda badan, waxaa loo shaqeeyaa si khaldan.
Qaybta dhexe ee istaraatiijiyada ikhtiyaariyada ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah waa Stochastic RSI, taas oo go'aamisa daqiiqada marka qiimaha uu bilaabo inuu ku laabto qiimihiisa "bartamaha". Tani waxay noqon doontaa calaamadda soo gelitaanka - sida ugu dhakhsaha badan bixitaanka ka imanaya xad-dhaafka / iibka badan ayaa bilaabmaya, waxaan u furaynaa ikhtiyaarka iyadoo loo eegayo isbeddelka. Isku dheellitirnaan dheeri ah oo isbeddellada aan kala sooca lahayn ah ayaa loo sameeyaa iyadoo loo eegayo MACD.
Muddada dhicitaanka (ansaxnimada ikhtiyaariga ah) waxaa loo xisaabiyaa iyadoo kuxiran hantida ama habka caadiga ah ee ka dambeeya max / min ugu dambeeyay ee maxalliga ah, oo ka muuqda Renko. Marka calaamadda gadaal ay ka muuqato ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo toos ah, ganacsatada qibrada leh waxay isku dayi karaan inay heshiis dheeraad ah ka furaan calaamadda cusub haddii sixitaanku sii socdo.
Mar labaad, waxaan ogsoonahay in farsamada, oo waliba sifiican ushaqeysa maalinta ganacsiga loo yaqaan 'crypto', loo sameeyay si loo fududeeyo falanqaynta muuqaalka suuqa. Tusaale istiraatiijiyad si fiican ula shaqeysa qalabka farsamada waa kiis gaar ah halkii uu ka ahaan lahaa xeer. Qiimuhu waa inuu muujiyaa isbeddello xilliyeed deggan oo si daciif ah ugu tiirsan cabbirka baarka; haddii kale, inta badan calaamadaha oscillators-ka ayaa been noqon doona.
Dabcan, waxaa jiri doona ganacsiyo aan faa'iido lahayn, laakiin marka la adeegsanayo shaxdan oo kale, sababahoodu waxay noqon doonaan kuwo ujeedo badan leh, oo kaliya maahan gelitaanka khasaaro, marka tilmaamayaasha kaliya ay bixinayaan "buuq" ama isbeddellada qiimaha degdegga ah ka dib markii la sii daayay aasaasiga ah wararka, taas oo caadi u ah hantida badeecada.
Jaantuska Renko ee falanqaynta suuqa
Jaantuska hanti kasta, waxaad ku fiirsan kartaa xaaladaha marka suuqleyda ay sameeyaan fikrado mala awaal ah, iyagoo hoos u dhigaya dhicitaanka iyo Joojinta Luminta ciyaartoyda yar yar, ka dibna u aado isla jihada. On Renko, xaaladaha noocan oo kale ah lama arki karo oo ha ka jeedin ganacsadaha.
Sidaa darteed, way ka fiican tahay in la raaco ikhtiyaarrada calaamadaha ganacsiga iyada oo la adeegsanayo qodobbada muhiimka ah: jabka, isku-tallaabidda celceliska iskudhafka, tilmaamayaasha xad-dhaafka / xad-dhaafka ah, iyo heerarka taageerada / iska caabinta. Laakiin xitaa halkan, jaantusyada isbeddelaya ayaa noqda dhibaato: jajabka ayaa laga yaabaa inuu been yahay; RSI-ku wuxuu "ku dhejin karaa" aagagga darafyadiisa, markii qiimaha muddo dheer soo jeestay, iyo wixii la mid ah. Isticmaalka Renko ayaa xaliya dhibaatadan waxayna kuu ogolaaneysaa inaad si sax ah u go'aamiso bixitaanka iyo dhibcaha xitaa dhibcaha.
In kasta oo qalabka badankood ay bilaabaan inay wax ka qabtaan, isbeddelka Ichimoku Kinko Hyo ayaa si wanaagsan loogu isticmaali karaa calaamadaha Bitcoin si loo go'aamiyo barta furan ee furan .
On timeframes ka H1 iyo wixii ka sareeya, halkaas oo baararka Renko ay noqon karaan 20-50 dhibcood oo cabir ah, haddii ay dhacdo isbeddel xoog leh, waxaad raadin kartaa heshiis adigoo isticmaalaya jaantusyada oo keliya, iyada oo aan lahayn tilmaamo dheeri ah. Waxaad ka geli kartaa suuqa adoo maraya meheradda ganacsiga laba-geesoodka ah marka baararka ay isku mid yihiin iyo marka shey midabkiisu ka soo horjeedaa u muuqdo, waqtiga ka hor, haddii dallaalku kuu oggolaado inaad xirato ikhtiyaarka.
Haddii aad isticmaasho oo kaliya shaxda iyo doorasho il live binary for falanqaynta inay ka yar tahay H1, waxaad ka heli kartaa wax badan oo ka mid ah goobaha laga soo galo been ah. Baararka waawayn ayaa seegi doona daqiiqada dhamaadka dhamaadka isbeddelka, kuwa yaryar ee ku jira 1-5 dhibcood ma shaandheyn doonaan "buuqa". Sidaa darteed, hubi inaad isticmaasho tilmaamayaal dheeri ah maalinta gudaheeda !
Ku isticmaal xulashooyinka binary
Sida qaab kasta oo kale oo falanqaynta suuqa ah, Renko wuxuu leeyahay astaamo ay tahay in lagu xisaabtamo marka la isticmaalayo jaantusyada aan caadiga ahayn.
Dhammaan jaantusyada Qiimaha dhow iyadoon xisaabta lagu darsan waqtiga ayaa u muuqda muuqaal xog badan - laambadaha isku dhejiska ah ayaa kuu oggolaanaya inaad aragto isbeddelka "dhabta ah" iyo heerarka taageerada / iska caabinta adag;
Ma jiro wax dhawaq ah oo suuqa ka jira, waxaad si sax ah u go'aamin kartaa heerarka hoose / hooseeya iyo dhibcaha dib u noqoshada isbeddelka;
Beddelida midabka jaantuska ayaa noqon doonta calaamadda ugu horreysa ee lagu furo ikhtiyaar. Muuqaalkooda ayaa loo adeegsan karaa si loo xaqiijiyo tilmaamayaasha kale, gaar ahaan dib u dhaca Celceliska Dhaqdhaqaaqa;
Tilmaamayaasha isbeddelka, oscillators-ka xad-dhaafka / xad-dhaafka ah, iyo istiraatiijiyad ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ah oo ku saabsan Renko ayaa si fiican u shaandheysa calaamadaha beenta ah, gaar ahaan waqtiga M15-H1.
Maqnaanshaha "hooska" dheer iyo kutlooyinka shumacyada «Doji» ee heerarka muhiimka ah ee Renko ayaa suurtogal ka dhigaysa in si dhakhso leh loo aqoonsado qaababka laambadda beddelka.
In kasta oo faa iidooyinka muuqda ee shaxda noocan ah, dhibaatooyin dhowr ah ayaa adkeynaya in si sax ah loo turjumo:
Kala-baxa ayaa laga saarayaa iyada oo ay weheliso buuq. Waxay qaadataa waqti in la sameeyo baar cusub - min daqiiqado ilaa saacado. Waxay ku muuqaneysaa jaantuska kaliya ka dib marka shumaca xirmo; taasoo walwal ku abuureysa ganacsatada cusub ee adeegsanaya ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah. Jaantuska 'Renko' waxaa loo xisaabiyaa gaar ahaan waqti dheer inta lagu jiro xilliyada isku-darka marka qiimaha uu ku socdo marin yar oo ka yar muddada xisaabinta baarka.
Marka uu jiro guri dabaq ah, waxaa laga yaabaa inay jiraan waxyaalo kacsanaan ah oo ka imanaya soohdimaha kala duwan, kuwaas oo lagu kala iibsan karo iyadoo la adeegsanayo istaraatiijiyooyinka istiraatiijiga ah. Shaxda laambadda, xaaladaha noocan oo kale ah isla markiiba waa la arki karaa; u isticmaal sida ku darista Renko .
Isbeddelku wuxuu ku kordhin karaa isgoysyada Celceliska Dhaqdhaqaaqa iyo heerarka qiimaha adag. Isla mar ahaantaana, dhowr baarar midab leh ayaa ka muuqda Renko oo isku xigta, calaamadaha binarykuna been bay noqdeen .
Marka baararka ka soo horjeedka ahi ka muuqdo isbeddel xoog leh, farqiga u dhexeeya qiimayaasha xad dhaafka ah ee dhibcaha waxay noqon karaan 3-4 jeer ka badan qiimaha caadiga ah ee lagu dejiyay goobaha tilmaamaha. Meelahaas oo kale, ganacsade isticmaalaya kaliya Renko wuxuu ku heli karaa khasaaro dhaca marka qiimaha uu bilaabo dib u gurasho ama dib u noqosho. Had iyo jeer isticmaal tilmaamayaal dheeri ah si aad u xakameyso ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah ee calaamadaha bilaashka ah!
Xaaladda ka soo horjeedda - aag ballaaran oo baararka ayaa loo sameeyay hal jiho, bilowga iyo horumarinta isbeddellada tani waa caadi, waad isku dayi kartaa inaad furto heshiisyo dheeri ah. Laakiin markii filimku dhammaado, calaamadaha Renko waxay noqdaan kuwo aad u sarreeya oo ganacsiga ka soo horjeedka ee tirinta dib u noqoshada badanaa waa khasaaro. Sug meelaha jihooyinka kaladuwan ka muuqdaan oo daawadaan tilmaamayaasha xaqiijinaya!
Soo koob. Inkasta oo ay jiraan dhibaatooyin, jaantuska Renko wuxuu sii wadaa inuu noqdo mid ka mid ah aaladaha ugu wax ku oolka badan sababta calaamadaha loogu talagalay ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah loo isticmaalo in lagu aqoonsado isbeddellada, dib u noqoshada iyo heerarka qiimaha adag ee hanti kasta oo maaliyadeed. Isla mar ahaantaana, natiijooyinka ugu fiican ayaa laga helay ganacsiga muddada-gaaban iyo macaamil-ganacsi oo soconaya ugu yaraan 2-3 saacadood .